Ekwentị Ahịa & Nkwado: 1-888-673-9567
Elọ njem ọnụahịa
EMLỌ ahịa PRO
BR DIS NKWUKWU
Soro anyị na Discord Server
Nsonaazụ gara aga
MAKA BLADING BLOGING BLOG
AKWYKWỌ AKW TEKWỌ AKWILYKWỌ NGWILY
AKW EDKWỌ OZI
EGO esi abanye n'okporo ụzọ
EGO NA-EGO FORBỌCH FOR N’AYT .R. AYBỌCH.
NTA OZI OMA
Chọta ikike ijere EXB TRTA
September 6, 2020 /by Iwuchukwu
Share site Mail
https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2020/09/Forex-Trust-The-Process.jpg 720 1280 Iwuchukwu https://www.forexlens.com/wp-content/uploads/2018/01/forex-lens-logo-expert-forex-signals.png Iwuchukwu2020-09-06 10:14:532020-09-09 04:38:15Usoro Nchekwa
More Banyere Forex
CADCHF Shorts Banye na US Mmanụ Ala + 200 Pips nke UruJune 15, 2021 - 4:53 elekere
Mmanụ Ala US + 150 Pips na Mkpa Dị mkpụmkpụ maka USDCADJune 14, 2021 - 4:35 elekere
Mmanụ Egwuregwu US +120 Pips na Dollar Na-agbaghaghachi Na BearsJune 11, 2021 - 4:40 elekere
Mmanụ US laghachiri na afọ dị elu + CADJPY na-eru nso ỌkwaJune 10, 2021 - 5:12 elekere
US Oil Hits First Target + AUDUSD Intraday ahiaJune 9, 2021 - 4:20 elekere
Gee Jon Morgan na SiriusXM ya na Andrew Krystal na Talks 167
Nnọkọ Nnọkọ Nzukọ
Nchịkwa Azụmaahịa Forex
Trazụ ahịa Forex
Ụlọ Ụlọ Ahịa Ndụ
Apụta Na SiriusXM
Soro ndi obodo anyi taa na Discord ma kparita ndi ahia anyi na ndi ozo! #ForexLens https://t.co/2RRYlrnJYH
- Forex Lens (@IGIHE) April 9, 2020
Mụta, Azụmaahịa, Uru
Forex Lens na-enye azịza azụmaahịa Forex maka ndị mbido na onye ọchụntaahịa na-azụ ahịa ọkachamara. Enwela onwe gị ịfe ozi email ma ọ bụ kpọọ anyị ajụjụ, azịza ma ọ bụ nchegbu.
Toronto, NA M5G 1B1
London, United Alaeze
© Copyright - Forex Lens - Anya gị n’ime Ahịa
Ndị di na anyị na - enweta ike dijitalụ & ahịa anyị Fuse Inc Gị
Mara amara na azụmaahịa Forex na azụmaahịa ọ bụla gụnyere ahịa crypto nwere ike mfu ego yana ọghọm ya. Ejila ego jiri ego aka na aka gi ikwusi. Ọ ga-ekwe omume idafu ego gị niile mgbe ị na-azụ ahịa dịka enwere ọtụtụ ihe na-adịghị n'aka gị ma ọ bụ nke anyị. Brofọdụ ndị ahia ahia ahia ahia nwere ike ijide gị maka ịzụ ahịa azụmaahịa karịa karịa itule ma gafere oke. Mara na ọrụ a bụ nke gị. Forex Lens adịghị ewe ọrụ ọ bụla maka ọghọm ọ bụla ị nwere ike ibutere n'ihi ọrụ anyị, akara ngosi Forex, akara crypto, akaụntụ jisiri ma ọ bụ akara ahịa ọ bụla ọzọ anyị nwere ike ịnye site n'oge ruo n'oge. Forex Lens A ga-eji ya dị ka ọrụ agụmakwụkwọ iji nyere gị aka ịhụ ka ndị na-azụ ahịa ụbọchị na ndị ahịa si agba izu na-arụ ọrụ site na ụbọchị ruo kwa izu na izu. Site na ịdebanye aha gị dị ka onye debanyere aha ị kwenyere nke ahụ Forex Lens adịghị enye ndụmọdụ banyere ego, kama ọ na-enye echiche agụmakwụkwọ na ahịa. Anyị anaghị eburu oke ọrụ maka uru ma ọ bụ mfu na akaụntụ gị n'ihi akara anyị na / ma ọ bụ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ọ bụla metụtara ngwaahịa gị na weebụsaịtị ọ bụla gụnyere nke a.
Nsonaazụ NFP (140 Pips) + 2 Ntọala Nkwa! Amụma Forex ECB + DXY na Reversal Point
Saịtị a na-eji kuki. Site n'ịnọgide na-achọgharị saịtị ahụ, ị ​​na-ekwenye na ojiji nke kuki.
Ntọala kuki na Nzuzo nzuzo
Anyị nwere ike ịrịọ ka etinyere kuki na draịvụ gị. Anyị na-eji kuki iji mee ka anyị mata mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ anyị, otu esi eme anyị, ime ka ahụmịhe onye ọrụ gị, na ịhazi mmekọrịta gị na weebụsaịtị anyị.
Pịa na isi edemede dị iche iji chọpụta ihe ndị ọzọ. I nwekwara ike ịgbanwe ụfọdụ ihe ị chọrọ. Mara na igbochi ụdị kuki ụfọdụ nwere ike imetụta ahụmịhe gị na weebụsaịtị anyị yana ọrụ anyị nwere ike ịnye.
Kuki weebụsaịtị dị mkpa
Kuki ndị a dị mkpa iji nye gị ọrụ ndị dị na weebụsaịtị anyị yana iji atụmatụ ya.
Ebe ọ bụ na kuki ndị a dị ezigbo mkpa iji nyefee weebụsaịtị ahụ, ịgaghị ajụ ha na-enweghị emetụta otu esi arụ ọrụ saịtị anyị. Nwere ike igbochi ma ọ bụ hichapụ ha site na ịgbanwe ntọala ihe nchọgharị gị na ịmanye igbochi kuki niile na weebụsaịtị a.
Nchịkọta Google Analytics
Kuki ndị a na-anakọta ozi a na-eji ma ọ bụ na nchịkọta iji nyere anyị aka ịghọta otu esi eji weebụsaịtị anyị ma ọ bụ otu esi azụ ahịa ahịa anyị, ma ọ bụ iji nyere anyị aka hazie weebụsaịtị anyị na ngwa gị iji kwalite ahụmịhe gị.
Ọ bụrụ na ịchọghị ka anyị soro visist gị na saịtị anyị, ị nwere ike gbanyụọ nsuso ihe nchọgharị gị ebe a:
Pịa iji mee ka / gbanyụọ nsuso nyocha google.
Ndị ọzọ na mpụga ọrụ
Anyị na-ejikwa ọrụ mpụga dị iche iche dị ka Google Webfonts, Google Maps na ndị na-eweta vidiyo mpụga. Ebe ọ bụ na ndị na-eweta ihe a nwere ike ịnakọta data nkeonwe dị ka adreesị IP gị anyị na-enye gị ohere igbochi ha ebe a. Biko mara na nke a nwere ike belata oke arụmọrụ na ọdịdị nke saịtị anyị. Mgbanwe ndị a ga-arụ ọrụ ozugbo ịbugharị peeji ahụ.
Ntọala Google Webfont:
Pịa iji gbanye / gbanyụọ google webfonts.
Ntọala Map Google:
Pịa aka mee ka / gbanyụọ maapụ google.
Vimeo na Youtube vidiyo:
Pịa aka mee ka / gbanyụọ ihe ntinye vidiyo.
Can nwere ike gụọ gbasara kuki anyị na ntọala nzuzo anyị na nkọwapụta yana Usoro Nzuzo Nzuzo anyị.